| အချိန်အထိအချိန် APK ကို Android အတွက် Download လှပသောနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ
ပင်မစာမျက်နှာ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » | အချိန်အထိအချိန် လှပသောနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ
| အချိန်အထိအချိန် လှပသောနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ APK ကို
အနာဂတ်၌မည်သည့်ရက်စွဲကိုဆင်း Count ။
တစ်ဦး timer နေရာမှာ Set သို့မဟုတျ, မိနစ်, နာရီ, ရက်, အလုပ်လုပ်ရက်ရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်လပေါင်းများစွာသငျသညျရနျအရေးကွီးကွောငျးကိုဖြစ်ရပ်တစ်ခုသည်အထိကျန်ကြွင်းမည်မျှစက္ကန့်ကိုကြည့်ပါ။ သင်လိုချင်တာကိုသူတို့အလိုအလြောကျနေ့စွဲဖြင့်အမိန့်ထုတ်ပါလိမ့်မည်ကဲ့သို့အများအပြားနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲကိုဖန်တီးပါ။ မဆိုအထူးနေ့စွဲဆင်း Count; ကခရစ်စမတ်, နှစ်သစ်ကူး 2019 သို့မဟုတ်သင်၏နောက်ယပ်လှေလှော်ခြင်းခရီးစဉ်ရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲများအတွက်နောက်ခံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်အရောင်များကိုနောက်ခံ phasing ကို default ထားခဲ့ဖို့မဆိုပုံရိပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါနှင့်ညှိ။ သငျသညျသတိပေးချက်များဖန်တီးနှငျ့သငျဖန်တီးနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲကိုမျှဝေနိုငျပါသညျ!
သငျသညျလညျးအတိတ်ဖြစ်ရပ်နှင့် set ကတည်းကအချိန်ကိုရေတွက်လို့ရပါတယ်။ Kit Kat (4.4) ခုနှစ်တွင်! သင်သည်အသကျရှငျပါပြီမည်မျှစက္ကန့်ကိုကြည့်ပါနှင့်အကြာမှာသင်တစ်ဦးမျက်နှာပြင်အပြည့်အတှေ့အကွုံအဘို့ကို double နှိပ် immersive မုဒ်ဝင်နိုင်ပါတယ်။
နှစျခု Widgets တွေတဦးတည်းကိုသူတို့ app ထဲမှာပြနေကြသည်လိုပဲနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲကိုပြသခြင်းနှင့်အခြားတစ်ဦးထက်ပိုသိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်ရိုးရှင်းသောနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲကိုပြသထားတယ်, ဒီ app နှင့်အတူထည့်သွင်းထားပါသည်။
သငျသညျအနာဂတျမှာ updates များကိုများတွင်တွေ့မြင်ချင်ပါတယ်ဆို feature ကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
သင် app ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်, ဘယ်လောက်ရှိသလဲပေးပါ။
အဆိုပါ USB သိုလှောင်မှုကိုခွင့်ပြုချက်ရဲ့ contents ကိုဖတ်ပြီးသင်သည်နောက်ခံဘို့ကောက်ရုပ်တုဆင်းတုကိုဖတ်ရှုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ပရီမီယံ upgrade အချိန်အထိ app ကိုငွေတောင်းခံခုနှစ်တွင် optional ကိုအချိန်အဘို့ဖြစ်၏။
အဆိုပါဖြတ်လမ်းခွင့်ပြုချက်သာအသုံးပြုနိုင်စေခြင်းငှါ၎င်း app ရဲ့အနာဂတ်ဗားရှင်းအဘို့ဖြစ်၏။
| အချိန်အထိအချိန် လှပသောနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ
3.81 ကို MB